စက်မှုလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို -- fscyal.com
အလူမီနီယမ်ရထားလမ်း / ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အတူခြံစည်းရိုး Changyuan အလူမီနီယံခြံစည်းရိုး / ဂဟေနှင့်အတူရထားလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအတွက်ပုံမှန်ခြံစည်းရိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလှေကားရထားလမ်းနှင့်လသာဆောင်ရထားလမ်းများအတွက်အထူးဖြစ်ပါတယ်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်း guardrail ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားရန်မလိုအပ်ပါ. ဒီဟာဟောင်းနေတယ်, မင်းကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုကယ်တင်ပေးတယ်…
ဖန်နှင့်အတူအလူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးသည်ယခုခေတ်တွင်လသာဆောင်များ၏ပြောင်မြောက်သောအိမ်သုံးခြံစည်းရိုးတစ်ခုဖြစ်သည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, လသာဆောင်အမျိုးအစားများအတွက်ဖန်ခွက်များကိုအဓိကအားဖြင့်သံလိုက်ဖန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ဖန်ထည်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောဖန်ခွက်ဖြစ်သည်. ဖန်ထည်မှန်သည်ကြိုတင်ပြီးဖိထားသောဖန်အမျိုးအစားဖြစ်သည်. ၏ခွန်အားကိုတိုးတက်စေရန်
စက်မှုပြွန်များအတွက်လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်းကို
စက်မှုပြွန်များအတွက်အလူမီနီယမ်ထုတ်ယူခြင်းပရိုဖိုင်း ChangYuan စက်မှုသုံးပြွန်အတွက်အလူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းသည်ခိုင်ခံ့သောအလူမီနီယံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။, အရာအပူကုသမှုအားဖြင့်ခိုင်ခံ့စေနိုင်သည်, annealing အောက်မှာအလယ်အလတ်ပလပ်စတစ်နှင့်အတူ, ခိုင်မာခြင်းနှင့်ပူအခြေအနေများ, ကောင်းသောအစက်အပြောက်ဂဟေ, နှင့်အလူမီနီယံပြွန်များ၏ intergranular အက်ကြောင်းဖွဲ့စည်းရန်၏သဘောထားကို ...
anodizing နှင့်အတူ Aluminum ပရိုဖိုင်းကို Changyuan Aluminum anodizing နှင့် electrophoresis များအတွက်အလုပ်ရုံနှစ်ခုရှိပါတယ်. Anodizing လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုအလွှာတစ်ခု anode အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့် electrolysis တစ်ခု electrolytic ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်, နှင့်အကာအကွယ်အောက်ဆိုဒ်ရုပ်ရှင်တစ် ဦး alumina ဖွဲ့စည်းရန်အလွှာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအတုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် ...
electrophoresis နှင့်အတူလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို electrophoresis နှင့်အတူ Aluminum ပရိုဖိုင်းကို alumina ပစ္စည်းတစ်ခု anode အဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော latex တွင်နေရာချခြင်းခွင့်ပြုသည်. လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်အလွှာအားအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ဖလင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် electrophoretic aluminium material အဖြစ်သွေဖည်စေရန်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းသည်။ …
သစ်သားစပါးနှင့်အလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုသစ်သားစပါးကိုလူမီနီယံတူအောင်ဖန်တီး, extruded လူမီနီယံပရိုဖိုင်းပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအမှုန်ရေမွှား - ဆေးသုတ်သည်, ထို့နောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သစ်သားစပါးကိုစက္ကူ paste, ပြီးနောက်လေဟာနယ်ကိုသုံးပါ, အပူနှင့်သစ်သားစပါးလုံးကိုရေမှုန်ရေမွှား primer ကိုထိုးဖောက်စေရန်အခြားဖြစ်စဉ်များ. ဖြစ်စဉ်၌, သစ်သားနှင့်တူသောလူမီနီယံ ...
အမှုန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသည်လူမီနီယမ် profile များကို electrostatic ပက်ဖြန်းခြင်း၏နိယာမ. အမှုန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောပစ္စည်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် electrostatic အမှုန့်ပက်ဖြန်းကိရိယာဖြင့်ပက်ဖြန်းသည်. ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအောက်မှာ, အမှုန့်ဟာအပြောင်အတုံးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတစ်ပုံစံတည်းစုပ်ယူလိမ့်မည် ...
လူမီနီယံ Casement တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်
လူမီနီယံ Casement တံခါး & ပြတင်းပေါက်လူမီနီယံ Casement တံခါး &၀ င်းဒိုးသည်ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးများပုံစံဖြစ်သည်. ခါးပတ်အဖွင့်နှင့်ပိတ်အချို့သောအလျားလိုက် ဦး တည်ချက်တစ်လျှောက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်, ဒါကြောင့်ဟုခေါ်သည် "အပေါ်ပြတင်းပေါက်နှင့်တံခါး". Casement ၀ င်းဒိုးနှင့်တံခါးကို push-pull အမျိုးအစားနှင့်အပေါ်ဆုံးဆွဲထားသည့်အမျိုးအစားများခွဲထားသည်. ၎င်း၏အားသာချက်များမှာ ...
လူမီနီယမ်မဟုတ်သောအပူချိုးတံခါးကို&ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းမရှိသောတံတားလူမီနီယံပြတင်းပေါက်များသည်အလယ်အလတ်အခန်းကန့်များမရှိပါ. မြေတပြင်လုံးကိုလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, နှင့်သတ္တု၏အပူကူးမှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ၎င်း၏အပူစီးကူး, အပူလျှပ်ကာ, နှင့်လုံခြုံမှုကိုအပူချိုးလူမီနီယံတံခါးကိုကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး&ပြတင်းပေါက်. ကျိုးပဲ့တံတားလူမီနီယံတံခါးများ ...